Milalao ny hoavy | NewsMada
Milalao ny hoavy
Tolona… Efa imbetsaka nitranga teto Madagasikara izany. Tolona ho an’ny fahafahana, ho an’ny tanindrazana, ho an’ny taranaka. Fanehoana fitiavan-tanindrazana mivaivay, sy fitsinjovana ny hoavin’ny taranaka ihany koa. Samy manana ny fandraisany azy anefa, ary samy nanana ny nampiasany izany koa.
Mitohy ny tolona… Midika fa maty momoka, tsy nahitam-pahombiazana, ireo tolona natao taloha. Tsy tonga ny fiovana nandrandraina. Nafampana izy, tato ho ato. Navoaka ireo mpiasa isan-tsokajiny. Tonga tamin’ny fakana ireo mpianatry ny oniversite eny Ankatso koa, omaly.
Mitolona ho an’iza? Raha ny fahitana ilay “video” miparitaka any anaty tambajotran-tserasera, mizara roa ireo mpianatra eny Ankatso. Nisy ireo nanara-dia ireo mpitolona notarihin’ireo depioten’ny fanovana. Andaniny kosa ireo nitoraka ilay “cocktail Molotov”. Porofo izany fa tsy misy miova ny fomba fanao? Misy hatrany ny mampiasa vola hisarihana ny mpianatra.
Manan-danja manokana ny mpianatra ambaratonga ambony, matoa nifantohan’ny mpanao politika hatrany ny hambaboana ny sain’izy ireo. Afaka manapa-kevitra amin’ny hoaviny, ary antenaina fa handray an-tanana ny hoaviny. Tena izay ve anefa ny mitranga? Toa milalao ny hoaviny no betsaka. Efa nanankina izany tamin’ny andry marefo fototra taloha. Izao indray, tsy fantatra tsara akory ny tena lalan-kizorana. Mitolona aloha…
Mety hitsimbadika anatin’ny indray mipi-maso ny toe-draharaha eto amin’ny firenena. Mety ho vy ahitana na tompon’antoka amin’izay mihitsy ny mpianatra eny amin’ny ambaratonga ambony. Mety ho fitaovana fotsiny koa anefa, izay ampiasain’ny andaniny sy ny ankilany.